Ivenkile 27.5 "phakathi kwedrive ebike ngamaxabiso aphezulu | ebike Shuangye
Ikhaya iimveliso Iibhayisikile zombane ezihamba phambili 27.5 ″ phakathi kwedrive ebike 350w bafang motor A6AH26MD
Imoto: 36V 250W / 350W phakathi kwedrayivu yokuqhuba
Ibhetri: 36V 10Ah / 13Ah ibhetri ye-lithium ekhutshweyo
Ubungakanani boMax: 25km / h-30km / h ngentlawulo nganye
ITire: 26 "* 1.95 / 27.5" * 1.95
Umthwalo omkhulu: i-100-120kgs
Izixhobo: 7 isantya
I-PAS: I-Multi Level Pedal Assistor Sensor
Bonisa: Ulawulo lwe-Screen LCD
Ukukhanya kwangaphambili: I-3W ebusweni bokukhanya ebusweni nge-USB yokushaja ichweba
Iinkcukacha Product Specification
27.5 ″ phakathi kwedrive ebike 350w bafang motor
le phakathi kwedrive ebike Yaxhotyiswa nge-bafang mid drive motor. Ukuhanjiswa kobunzima obufanelekileyo kunye nokunxibelelana okungcono komhlaba, ibhayisekile yombane iza ne-Bafang mid-drive motor ayisiyiyo indalo kuphela, kodwa ikhuselekile ngakumbi. Kwaye ilungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla esixekweni nakwimimandla esijikelezileyo. Kukho i-250w okanye i-350w yeemoto ezinokuthi zikhethwe, zenza ukuba ukwazi ukuhamba ngebhayisikile endleleni ngesantya se-25km / h umndilili wesantya. Ke ngoko, phakathi kwe-drive ebike inokumelana nesidingo sokukhwela ibhayisikile kwiindawo ezineenduli.
Ezahlukileyo nge-hub motor, i-350w ye-dirve ye-bafang motor ayakhiwanga kwivili, kodwa ihlala ikhweliswa kufutshane nasezantsi kwesakhelo sebhayisekile. Yiyo loo nto ke unikezelo lokuqhutywa kweenyawo kunakwivili, ekugqibeleni lisetyenziswa kwivili ngololiwe oqhuba ibhayisekile. Ngenxa yokuba amandla asetyenziswa kwikhonkco kunye ne-sprocket, phakathi kwebhayisikili yombane isebenzisa ii-watts ezingama-250 okanye ii-watts ezingama-350 zamandla emoto, ezinokuthi zikhusele ngokuchasene nokunxiba okukhawulezayo kwi-drivetrain.
Ukuxhotyiswa nge-drive yedrive ye-bafang ye-LCD kunye nolawulo lwamaqhosha amathathu. Iphaneli enkulu yokubonisa yazisa ngazo zonke iinkcukacha ezibalulekileyo zokuqhuba njengesantya, inqanaba lenkxaso, umgama wokuqhuba, inqanaba lebhetri kunye nexesha. Amaqhosha aphezulu kunye nezantsi anokuhlengahlengisa iNqanaba lokuNcedisa ukuNceda (ukusuka ku-0 kuye ku-5). Isibane esingaphambili sinokutshintshwa ebusuku okanye kwimozulu embi.
Oku kusetyenzwa phakathi kwe-ebike kusetyenziswa uyilo lwebhetri olufihliweyo olukwisakhelo sebhayisekile, kwaye savunyelwa ibhetri ye-lithium ye-36V 10AH. Kwaye kwi-sigle egcweleyo yokutshaja, le mileage ye-ebike's mileage range inokufumana i-25-30 yeemayile phantsi kwemowudi ye-E-bhayisekile kunye neekhilomitha ezingama-50-60 phantsi kwendlela yokuNcedisa ukuNceda. Hlanganisa iindlela ezimbini, kukunceda ukukhwela ibhayisikile ngokulula nangokukhawuleza kunebhayisekile eqhelekileyo. Kwaye ukusebenza kwayo okususwayo kukwenza ukuba ukhuphe ibhetri ngokulula ukutshaja nakweyiphi na indawo eneziseko. Kwaye ixesha layo lokutshaja ziiyure ezingama-5-7.
Ukuqinisekisa ukuba umkhweli ngamnye uneemeko ezikhuselekileyo nezikhuselekileyo zokuhamba ngebhayisikile, sisebenzisa iperi ye-aluminium alloy brake lever kunye ne-160 ye-brisk disc brake system kwindawo nganye yedrive ebike. Zombini zinokumisa ivili lebhayisikile langaphambili okanye ivili langemva ngokulula xa umkhweli ecinezela i-lever aluminium lever.
I-7 gear ene-derauilleur
Ukulungelelanisa iimfuno zabantu ezahlukeneyo kunye nentandokazi, isantya se-7 sedilleilleur sisetyenzisiwe kule ebike. Kukutshintsha i-flywheel gear kakuhle kwaye ngokulula, khetha izixhobo eziphezulu okanye izixhobo ezisezantsi zixhomekeke kukuthanda kwakho.
Isibane se-3W esikhanyayo ngaphambili sokukhwela ebusuku ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho lokukhwela, kwaye sixhotyiswe ngefowuni yokutshaja ifowuni yakho kumandla ebhetri asezantsi.
Ukuba unomdla ngakumbi kwiibhayisekile zombane zeebhayisikile zombane, ndwendwela ibhayisikili yombane, ibhayisekile yombane wedolophu ephakathi, ityhuthri yamandla kagesi, ebike yendlela.
* Uhlobo lomsebenzisi: Personal ishishini zokusasaza
Tags:mid-drive e ibhayisekile bafang e ibhayisekile
Prev: Eyona bike intaba yombane ye-36V ibhetri ye-lithium A6AH26
Next: Ibhayisekile yombane entsha engu-A6-R enamavili angama-700 * 35C
ibhasikizi yamandla kagesi
Eyona Bike yoMbane ehamba phambili
I-Shuangye yamabhayisekile ombane amatsha asunguliwe
I-Bikes eziBalaseleyo zoMbane ngo-10
IYurophu emakethe yebhayiseki yombane
I-bhisikiyumu engcono kakhulu yaseMelika yokuthengiswa kwisitokisi
eyona nto ibhetele yamagesi e-mountain in Canada ekuthengiseni impahla
Catalogue yeBhasiki yeMbane
I-Shuangye entsha yebhayisikile ehamba ngebhayisikili yeemoto 48V 500W ebike ibhetri 48V 10AH A5AH26
IShuangye ibhayisekile entsha yombane kunye nebhetri ye-36V
250W motor bafang phakathi kwedrayivu yebhayisekile yentaba
Iibhayisikile zendlela ezizodwa zombane 700C * 35C
I-36V 350W ibhayisekile yendlela yombane eyi-160 hydraulic disc brake
Wamkelekile kwi-Shuangye 129th Online Canton Fair
Wamkelekile kwi-Shuangye Online Hong Kong Electronics Fair
I-Shuangye ekwi-Intanethi bukhoma kwi-128th Canton Fair
I-128th Canton Fair iya kubanjwa kwi-Intanethi ngo-Okthobha
Ungayikhetha njani isithuthuthu esineemoto kwisikhokelo sokuthenga
Izibonelelo zokuthenga ibhayisekile yombane
Imbaleka ngokukhawuleza ihamba nge-750w motor yombane yamafutha omoto
Yeyiphi yeeBikes zombane eziBalaseleyo Ngaphantsi kwe- $ 1000
Izizathu ezi-4 abantu bakhetha ukuhamba ngebhayisekile yombane
Iibhayisikile ezi-3 ezithandwayo ezithengiswayo-Fezekisa iimfuno zakho
Yintoni amandla encedisa ibhayisekile?
Uyigcina kanjani i-Bike ye-Bike yakho isempilweni
Ungazi njani ukuba yeyiphi uluhlu lwebhayisekile yombane ende?
UShuangye ukudibana nawe kwi-127th Canton Fair 2020
Ukusonga ii-ebikes: yongeza lula lula kubomi bakho obuxakekileyo
Imbali yophuhliso lweebhayisikile zombane
Iindlela zolondolozo lweemoto zombane zebhayisekile